Canon EOS R6 ongororo: Kugadziriswa kwepazasi, mhando yepamusoro?
Yakanga yadzoka muna Kukadzi 2020 apo Canon aiseka kamera nyowani: iyo EOS R5. Kana iyo 8K-vhidhiyo-yekupfura yakazopedzisira yabuda, yakaonekwa padivi peiyo yepazasi-spec (uye inodhura) chinobva: iyo EOS R6.
Kune vazhinji iyi iri R6 iyo ichaita kuti iwedzere kuita zvine musoro. Kwete chete kuti iwe uchengetedze packet nekuenzanisa - kunyangwe iri kure nemutengo wakaderera - iwo maratidziro achiri anowanzo shaya-kudonhedza yakazara-furemu kamera.
Iyo EOS R6 iri, munzira zhinji, inomiririra uko kwaCanon isina girazi akateedzana ari kunangiswawo. Iyi kamera inoratidzira yekambani DSLR mutsara-kumusoro maererano nemamiriro epanyama uye (kune imwe nhanho) mashandiro, asi makemikari mune zvirinani-zvichiri mhando yemhando uye maficha, ichiwedzera kuzvipira kwekambani kune yayo RF lens gomo.
Asi naNikon zvakare inopisa pazvitsitsinho uye nemakamera ayo matsva - iyo Z6 uye Z5, iyo imwe neimwe inowanikwa kunyange nemari shoma - Canon yakawana chiyero pano?
Dhizaini & Lens Gomo
Canon RF mount (EF / EF-S kuburikidza neadapter)
Dual SD kadhi slots (UHS-II inoenderana)
Guruva & mwando yakavharidzirwa magnesium alloy muviri
Yakavakwa-mukati mekutarisisa yemagetsi (0.5in, 3,690k-dot OLED)
Tilt-angle yakasungirirwa yekubata-skrini (3.2in, 1,620k-dot LCD)
Kana Canon yatanga yayo yekutanga RF kukwira kamera, iyo EOS R, yakagamuchirwa nemhinduro yakasanganiswa. Pakanga pasina kupokana kuti iyo lens inokwira ine mirwi yezvingaitika - chimwe chinhu icho iyo R6 inobatsira kubva - asi marongero ayo aive akarasika Odd.
Iyo yekupedzisira poindi haisi kunetsekana neiyo EOS R6: kunhonga iyi kamera inonzwa sekushandisa kumusoro-kune-iyo-maminetsi Canon DSLR, iine nyore-kushandisa-intuitive dhizaini nezvose zvekupa. Zvingangoita se7D II mune irwo rukudzo.
Iyo R6 inobatsira kubva kune yakasimba kuvaka, yayo magnesium kumusoro-yakafukidzwa polycarbonate muviri unounza guruva- uye kupwanya-kuramba kwevimbiso, uku uchiramba wakawandisa huremu semhedzisiro (iri 680g - kunyangwe iri kure zvakanyanya nechero RF lens yakasungirirwa).
Spec for spec iyo EOS R6 inoitisa iyo Nikon Z5 kusvika padanho rakaringana: iyo yakavakirwa-mukati OLED yemagetsi yekuona yakafanana yakafanana nehukuru, resolution uye zororo. Ndokureva kuti chiitiko chakanakisa - kunyangwe iyo Nikon inogona kuendesa zvakafanana pano nemari shoma shoma iri pamubvunzo.
Iko EOS R6 inokwira kumusoro notch iri nekusanganisira iyo vari-angle yakaiswa 3-inch yakakwira-resolution resolution LCD yekubata. Kugona kuendesa izvi kudivi rekamera, uyezve kuburikidza neuzere 360-degree kutenderera sezvaunoda, zvinonyanya kubatsira kupfura simba - kungave kwakamira kana kufambisa mifananidzo, ruoko, pane rig, kana kubva patatu.
Image kudzikamisa system - kusvika masere anomira
Chiso / maziso / kuona mhuka & kuteedzera
12fps yakaputika (20fps yemagetsi)
Kugadziridzwa AF point size
Wi-Fi & Makaralı
Pane zvakawanda zvirikuitika pasi pehodhi yeCanon iyi futi. Icho chiri pakati pekutanga EOS kamera yekugamuchira yeCanon yechipiri-chizvarwa Dual Pixel CMOS AF system. Mune ino nyowani 2020 guise inokurumidza kupfuura nakare kose - nekukurumidza se0.05s, Canon inotsigira - uye zvakare inoratidzira ziso / kumeso / kuteedzera kwemuviri uye kuona mhuka.
Kwete kuti iyo EOS R6 ndeye chete yekupfura mhuka dzako dzinovaraidza. Iyo kamera zvakare ine kudzidza kwakadzama, saka paunonyanya kupfura zvidzidzo, zvakanyanya mamiriro kamera ichafanirwa kunzwisisa nzira dzako. Chokwadi, imbwa nekatsi ndiyo mhando dzakakurumbira dzakarongedzwa kuti dzizive, asi zvakare kune shiri - kusanganisira shiri dziri kubhururuka - chinozove chibvumirano chakakura che swathe hombe yevanofarira.
Iyo yazvino Digic X processor kuve mubhodhi zvakare zvinoreva kumhanya kwakanyanya: iyo R6 inogona kukanda kure pa12fps uchishandisa yayo mechina shutter, kana iwe unogona kukwidziridza iyo kusvika 20fps uchishandisa iyo yemagetsi chete shutter. Izvo zvinokurumidza zvakanyanya kupfuura iyo Nikon Z5, saka tinogona kuona zviri nyore kuti nei iwe uchibhadhara mamwe mapeni pano kuti ubatsirwe neakadai ekupedzisira-magumo.
Iyo itsva autofocus system inowanzo shamisa zvakare. Kusiyana nemamwe makamera akareruka eCanon, pane kuwanda kwema modhi pano: kuteedzera; banga, 1-poindi, wedzera nzvimbo, wedzera nzvimbo yakatenderedza, nzvimbo, hombe zone, uye hombe zone yakatwasuka.
Sarudza chero sarudzo dzenzvimbo uye kamera yakanakisa kukiya pazvidzidzo - kunyangwe iwe uri kushandisa yekubata yekubata kubatsira, uchishandisa kumashure kumashure, kana kurega kamera zvine hungwaru kusarudza sezvainoona zvakakodzera. Iko kushomeka kwekururamisa, kungave, iine 1,053 nzvimbo dziripo dziri kushandiswa - uye zvichioneka zvichioneka pachiratidziro mune chaiyo-nguva - kukiya pane chako chakanangwa chidzidzo.
Iyo EOS R6 zvakare ine hungwaru kune yakaderera-mwenje mamiriro. Iyo inogona autofocus yakaderera se -6.5EV, iri pamusoro pemamiriro ekuvhenekera kwemwedzi - zvakanyanya kunge mwenje wemwenje chaizvo - uye inoita basa rakanaka mumamiriro akasviba. Dambudziko rakakura ratange tichiita nderekuve padhuze nepadhuze nekutarisisa kuti kuvepo. Asi kugona kupfura zviri nyore kunyangwe zvakanyanya backlit zvidzidzo zvakanaka.
Zvese izvi zvinowedzerwazve kubatsirwa neCanon yakavakirwa-mukati mufananidzo kudzikamisa system, kuti ubudise yakawedzera kupinza kubva kune yega pfuti. Ndoizvo chaizvo zvaunoda kuti ubate kana uchipfura nehukuru hwakazara-furemu sensor, pasina kupokana, uye iyo system inoita stellar basa mukubatsira.
20-miriyoni pixel yakazara-furemu CMOS sensor
ISO 100 kusvika ku102,400 senitivity (inowedzera kusvika ku204,800)
Vhidhiyo inotora: 4K pa60 / 50/30/25 / 24p (1.7x chirimwa); Yakazara HD (1080p) pa120 / 100/60/50/30/25 / 24p
Iko chete kusanzwisisika chaiko - kana iwe uchigona kuidana iyo - ndiyo EOS R6's 20-megapixel resolution. Kunyange makumi maviri emamirioni echinhu chero chisiri 'chakaderera', icho chakadzikira pane yakawanda yemakwikwi iri kupa mazuva ano. Uye isu tinoziva kuti Canon's RF gomo inokwanisa kubata kutendeseka kwakanyanya - chinova chikamu chechinangwa chekugona kwesystem, uye nei iyo EOS R20 ichipa zvakapetwa kaviri chisarudzo (pa5MP).
Izvo zvakati, 20MP mifananidzo ichiri yakati rebei. Uye nekwanisi yekupfura mabhureki epfuti, resolution uye kumhanya zvinoita kunge zvinofambidzana. Zvakadaro, iyo 24MP kana 26MP sensor ingadai yakaita zvine musoro mumaonero edu - kunyangwe chete yekuwedzera mukana wekukohwa kuita kupfura.
Kunyange zvakadaro, chisarudzo ichi chinounza mabhenefiti acho: mifananidzo kubva kuEOS R6 ine mbiri inopesana neruzha rwemufananidzo - kusvika pakadaro kuti kunyangwe mashanu-manzwisisiro e ISO haaratidze chero ruzha rwemavara mupfuti. Chokwadi, hapana huwandu hwakaenzana hwakadzama paIO 10,000, asi zvinokatyamadza kunaka kwese kwese pano. Pfura pamusuwo weIOS marongero uye iwe unogona kutarisira yakasarudzika mufananidzo kuburitsa kusvika kuIO 800, isina kana mutsauko mune inooneka tsananguro.
Hunhu hausi pasi pekutsvaga ruzha rwemufananidzo, asi chokwadika, neiyo EOS R6 yakazara-furu sensor inobvumira kubwinya kwakadzika kudzika-kwe-munda mikana. Saizi yekuwedzera saizi inongowedzeredza iyo yakanyungudika isina kuona kumashure uye chiyero chekutonga pamusoro payo.
Uye hapana chaicho kusahadzika neiyo RF lenzi mhando. Iyo 24-70mm f / 2.8 yatange tichishandisa iri inoshamisa chose. Icho chakati kurei kupesana nemuviri wakaderera weR6 hazvo. Asi iyo saizi kutamba-kure kwakakosha kune iko kupinza uye yekuzarura kutonga pane kupihwa.
Beyond ichiri kubatwa kwemifananidzo pane vhidhiyo inotora inosvika ku4K mune yakazara huwandu hwefreyimu-mareti. Idzo inowanzo kuve nhau dzakanaka, asi Canon haikwanise kuenda kure kure pano - nekupisa nyaya inozivikanwa inogona kupindira mukugona kurekodha mune iyi UHD resolution. Donhedza kuZere HD / 1080p uye hapana zvakadaro nyaya zvakadaro. Chinhu chekufunga nezvacho, kunyangwe iyo R5 iri yakawanda modhi nekutarisisa vhidhiyo.
Yako Yenhare Dhijitari Zoom Sucks-Inguva Yekutora Chaiyo Kamera
Nhema Chishanu Kamera Deals, Mabundles At Amazon, Zvakanakisisa Kutenga, Target, Walmart
Canon Inogona Kugadzira Ultra-Inodhura Kamera Inotengeka